အပိုင်း: ထင်မြင်ချက် 2022 ဇူလိုင်လ
ထင်မြင်ချက် 2022, ဇူလိုင်လ
ထိပ်ဖျားသေဆုံးမှုများကို တားဆီးရန် ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ (2022)
ပြိုကျသောပရိဘောဂများ၏ ဘေးကင်းမှုအန္တရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဥပဒေကြမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစစ်အမှန်ရေသည် FDA ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုနစ်မြုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ (2022)
ပြီးခဲ့သည့်လတွင်၊ Real Water အမှတ်တံဆိပ် အယ်ကာလိုင်းရေကို အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် FDA ဘေးကင်းရေးသတိပေးချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဇာတ်လမ်းသည် ပျောက်ဆုံးသွားသော အမှုထမ်းများ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ၊ နှင့် တရားစွဲမှု နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု အပါအဝင် မှုခင်းဝတ္ထုကဲ့သို့သော လှည့်ကွက်များ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
ချောကလက်၏ လျှို့ဝှက်ပါဝင်ပစ္စည်းမှာ အရသာအလွန်ကောင်းမွန်စေသည့် အချဉ်ဖောက်ပိုးမွှားများဖြစ်သည်။ (2022)
ကွတ်ကီးကို ချစ်ပ်များအဖြစ် ဖုတ်ပြီး ချိုမြိန်သော အနွေးရည်အဖြစ် အရည်ပျော်သည်ဖြစ်စေ ပြုံးနေသော ယုန်ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ပုံသွင်းသည်ဖြစ်စေ ချောကလက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံးအများဆုံး အစားအစာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးသား မြှင့်တင်ရေး ထုတ်ကုန်များ ပြန်လည်ခေါ်ယူမှု စတင်နေပြီလား။ (2022)
အသစ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုတွင် အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းအချို့အပါအဝင် အညွှန်းတွင်မပါဝင်သော ပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းအများအပြားကို အကျုံးဝင်သည်။
တစ်ပတ်တာ၏ တန်ဖိုးရှိမှု (2022)
ဆေးဝါး နှစ်ခု၊ အစားအသောက် ဖြည့်စွက်စာ နှင့် အချို့သော စက်ပစ္စည်းများကို တံဆိပ်မကပ်ထားသော သောက်သုံးမှုများ၊ လျှို့ဝှက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဒဏ်ရာများ နှင့် အခြားအရာများ အတွက် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။
Covid ကယ်ဆယ်ရေးဥပဒေတွင် ကျန်းမာရေးအာမခံအကူအညီအများအပြား-သို့သော် သင်၏အိမ်စာကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ပါ။ (2022)
American Rescue Plan Act တွင် သီးသန့်ကျန်းမာရေးအာမခံရှိသည့်လူတိုင်းအတွက် တစ်ခုခုရှိသော်လည်း အကျိုးအမြတ်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် အချိန်တန်ပြီလော။ (2022)
အနာဂတ်သမ္မတများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်ကြောင်း စိတ်ရောဂါပညာရှင်တစ်ဦးက စောဒကတက်သည်။
Nasal decongestant သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်သည်- FDA (2022)
ဘယ်သူကမှ နှာခေါင်းပိတ်တာကို မကြိုက်ကြပေမယ့် FDA ရဲ့ သတိပေးချက်အသစ်က အရောင်းဆိုင်မှာ နှာခေါင်းပိတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူတွေကို သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ပျော့ပျောင်းအောင် ပြုလုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
အလုပ်ပျက်သွားပြီလား? အခမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်6လသည် သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ (2022)
သမ္မတ၏အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဥ်တွင်ကပ်ရောဂါကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားသောလူအများစုအတွက် COBRA လွှမ်းခြုံမှုထပ်တိုးပါဝင်သည်။
Peloton ပြေးစက် မတော်တဆမှုကြောင့် ကလေးသေဆုံး (2022)
Peloton ပြေးစက်ပါ၀င်သည့် ကလေးငယ်တစ်ဦး မတော်တဆသေဆုံးမှုသည် မိဘများအတွက် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို လေ့ကျင့်ခန်းပစ္စည်းများအားလုံးကို ဝေးဝေးတွင်ထားရန် သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။
FDA- STAR Ankle Implants ကျိုးသွားနိုင်သည်။ (2022)
FDA သည် Scandinavian Total Akle Replacement (STAR) ခြေချင်းဝတ်ကို အစားထိုးခြင်းများကို လက်ခံရရှိသော သို့မဟုတ် စဉ်းစားနေသည့် လူနာများအတွက် သတိပေးချက်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Cheese Recall သည် ယခုအခါ ပြည်နယ် 26 ခု လွှမ်းခြုံထားသည်။ (2022)
ပြီးခဲ့သည့်လတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် FDA သတိပေးချက်အား အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီး El Abuelito Cheese မှ ပျော့ပျောင်းသော ဟစ်စပန်းနစ်စတိုင်ချိစ်များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုအား တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားပြည်နယ်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
တံဆိပ်မှားနေသော ခွန်အားအတွက် Spironolactone ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပါ။ (2022)
Bryant Ranch Pharmaceuticals မှထုတ်လုပ်သည့် spironolactone ဆေးကို သောက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ဆေးစာပုလင်းကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။
ထိုအသီးအရွက်များကို နေ့တိုင်းစားပါ – အသီးအနှံ နှစ်ကြိမ်ကိုလည်း စားပေးပါ။ (2022)
National Institutes of Health, Diabetes, Diabetes, and Kidney Diseases နဲ့ American Heart Association တို့က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ လေ့လာမှုအသစ်အရ သစ်သီး ၂ လုံးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၃ မျိုးကို နေ့စဥ်စားတာက အသက်ပိုရှည်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
FDA သည် ကူးစက်ရောဂါ လိမ်လည်သူများကို Bay တွင် ထိန်းထားနိုင်ပါသလား။ (2022)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုသို့ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မည်သည့်ထုတ်ကုန်များကို ယုံကြည်ရမည်ဟု သိရန် ယခင်ကထက် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။
ပီယာထဲက ချယ်ရီသီးကို ယူပြီး ပြင်သစ်အ၀တ်အစားထဲက ချယ်ရီသီးကို ယူပါ။ (2022)
ချယ်ရီသီးအဆာတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး မုန်လာဥနီကိတ်မုန့်ဒိုးနပ်တွေ မုန်လာဥနီတွေ ကင်းစင်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ငါတို့ယုံကြည်ဖို့ ဘာကျန်သေးလဲ။
ဤအာဟာရဖြည့်စွက်စာများတွင် ယုံကြည်မှုမရှိပါ။ (2022)
အစားအသောက် ဖြည့်စွက်စာ ထုတ်လုပ်သူ Confidence USA Inc. နှင့် ၎င်း၏ ထိပ်တန်း အမှုဆောင် နှစ်ဦးကို ဖက်ဒရယ် တရားသူကြီး တစ်ဦး က အမြဲတမ်း တားမြစ်မိန့် တင်သွင်း ခဲ့သည်။
Class I Recall- Medtronic HVAD Pump Implants (2022)
ထုတ်လုပ်သူ Medtronic သည် ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် HVAD Pump Implant Kits များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေသည်။ Pumps များသည် နှလုံးခုန်နှုန်းကို ကောင်းမွန်စွာ မတုံ့ပြန်နိုင်သော်လည်း သေစေနိုင်သော ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။
ရယ်စရာ တစ်ခုခု အနံ့ခံမလား ငါး၊ ဒိန်ခဲ၊ ဆေးဝါးများအတွက် သတိပေးချက်နှင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း (2022)
အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနမှ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းသည့် အပ်ဒိတ်တစ်ခုအတွက် အချိန်တန်ပြီ၊ သင်၏စားသောက်ခန်း၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဆေးဝါးပုံးများကို စစ်ဆေးရန် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
သင့် iPhone မှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်အသစ်တစ်ခု။ (2022)
သင့်တွင် နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းစက်ရှိလျှင် iPhone 12 ၏ MagSafe လုပ်ဆောင်ချက်သည် မလုံခြုံနိုင်ပါ။
အာမခံစာရင်းသွင်းခြင်းများအတွက် ACA Marketplace ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဤသည်မှာ သင်သိထားရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ (2022)
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိသောသူများအတွက် သက်သာရာရနေပြီဖြစ်သည်။
Xeljanz သောက်နေလား။ လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အသစ် (2022)
အသစ်ထွက်ရှိထားသော ဘေးကင်းရေး စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် Xeljanz နှင့်ဆက်စပ်သော နှလုံးနှင့် ကင်ဆာအန္တရာယ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကို ရှင်သန်ခြင်း- DIY-er ၏ လမ်းညွှန် (2022)
ဆောင်းရာသီ နှင်းမုန်တိုင်းများကလည်း ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြတ်တောက်သွားသည်။ ဤသည်မှာ သင့်အိမ်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် အကြံပြုချက်အနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
Pepperoni Hot Pockets များကို ညစ်ညမ်းစေသော ပစ္စည်းများအတွက် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ (2022)
Nestle Prepared Foods မှ ပေါင် 700,000 အလေးချိန်ရှိ Hot Pockets များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း
အရမ်းမချိုပါဘူး- FDA က Washington Juice Processor ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ (2022)
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရှိ ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်သူသည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်သေဆုံးမှုများသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ (2022)
Sportmix အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအတွက် ပြန်လည်ခေါ်ယူမှုသတိပေးချက်ကို ထုတ်ကုန်များပိုမိုကာမိစေရန် တိုးချဲ့ထားပါသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ၇၀ နှင့်အထက် သေဆုံးမှုအတွက် အဆိပ်အတောက်ကင်းသော ခွေးအစာအတွက် အပြစ်တင်ခံနေရသည်။
ကိုဗစ်အကြိုအတည်ပြုထားသော ဓာတ်မတည့်သောဆေးတစ်မျိုးသည် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ (2022)
မြေပဲဓာတ်မတည့်မှုကုထုံး၊ ကိုဗစ်အကြိုအတည်ပြုထားသော၊ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
ဒီတစ်ပတ်မှာ Metformin Recall ပါ။ (2022)
FDA သည် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် အမျိုးအစား2ဆီးချိုဆေး Metformin ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
လူနာဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာများပေါ်တွင် ဆေးလိပ်မီးခိုးများ ရှင်းရန်အကြောင်း (2022)
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သမ္မတ Trump လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာမျက်နှာပေါင်း 6,000 နီးပါးရှိသော COVID-19 ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် Omnibus အသုံးစရိတ်ဥပဒေကြမ်းတွင် မြှုပ်နှံထားသည့်အရာသည် မမျှော်လင့်ထားသော်လည်း ကြိုဆိုရမည့်သတင်းဖြစ်သည်- "အံ့အားသင့်စရာဥပဒေ"
Wisconsin တွင် Holiday Cheer သည် Raw Meat Sandwich ဖြစ်သည်။ (2022)
အချို့က သူတို့ကို ကုသဆေး၊ အချို့က ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ (ခေါ်) ကျား သို့မဟုတ် လူသားစား အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များသည် Wisconsin ရှိ အားလပ်ရက်စားဖွယ်အဖြစ် အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
Frito-Lay တွင်၊ အချို့သော Chips များ ကျသွားပါပြီ။ (2022)
Frito-lay သည် ဓာတ်မတည့်မှု နှင့် ချစ်ပ်များ ရောနှောခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် FDA မှ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အွန်လိုင်း ကူးစက်ရောဂါကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ (2022)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိများ၊ အကြံပြုချက်အချို့- လူမှုမီဒီယာကို လူအများထံရောက်ရှိရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းအဖြစ် သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီးရှိတဲ့နေရာပါ။
အချို့သောဆံပင်ထုတ်ကုန်များတွင် Formaldehyde ခိုအောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ? (2022)
ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းကုထုံးများတွင် ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်ပါဝင်မှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လူသိများသော ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါဆိုဘာလို့အဲဒီမှာရှိနေတာလဲ။
ဤပြောင်းလဲမှုသည် အစားအသောက်ထုပ်ပိုးမှုတွင် အာဟာရတန်ဖိုးကို ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများသို့ ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ (2022)
အစားအသောက် အညွှန်းအသစ်များသည် ထုတ်လုပ်သူများအား ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကျန်းမာစေရန် တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
Earwax သည် လေးစားမှုကို ရရှိစေသည်- ၎င်းသည် Cortisol အဆင့်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။ (2022)
UK ရှိ သုတေသီများသည် လူတစ်ဦး၏ ကော်တီဆော အဆင့်ကို တိုင်းတာရန် ဆန်းသစ်သော နည်းလမ်းတစ်ခု - စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဟော်မုန်း - အနာဂတ်တွင် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ဖိစီးမှု အဆင့်နှင့် အလားတူ အခြေအနေများကို ခြေရာခံရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေမည့် ဆန်းသစ်သော နည်းလမ်းကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ကပ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပြဿနာများသည် ကျန်းမာရေးအာမခံရွေးချယ်မှုများကို ကြတ်စေမည်ဖြစ်သည်။ (2022)
COVID-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ် သံသယဖြစ်ဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်စာရင်းသွင်းကာလဖြစ်သည်။
အပြာရောင်အလင်းနည်းသည် ပိုမိုအိပ်စက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ (2022)
ရိုးရှင်းသော အပြာရောင်အလင်းမျက်မှန်များသည် အပြာရောင်အလင်းတန်းများနှင့် ထိတွေ့မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ညဘက်တွင် သင်၏အိပ်စက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကြောက်စရာကောင်းသော Threesome - ဆီးချိုရောဂါ၊ BP မြင့်မားခြင်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ (2022)
သွေးတိုး၊ ဆီးချိုနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါတို့ကြား ဆက်စပ်မှုကို သိရှိရန် အရေးကြီးသည်။
Metformin ER သည် ရပ်တန့်မနေပါ။ (2022)
အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါကိုကုသရန်အသုံးပြုသော metformin ဆေးကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းသည်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိပါ။
မဲဆန္ဒရှင်များအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရှင်းလင်းခြင်း။ (2022)
ဘယ်ဘက်ကပဲ ရပ်တည်နေပါစေ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အများကြီးရှိတယ်။